Vaovao tsara ny Filazantsara - Church of God Switzerland of the Worldwide
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Vaovao tsara ny filazantsara
Jesosy dia tsy nanome antsika ny baiko hanambara loza sy haizina. Nanome hafatra feno fanantenana ho antsika Izy. Nangataka antsika izy mba hilaza amin’izao tontolo izao fa vao manomboka ny fiainana, fa tsy “manosotra” azy. Mihodina manodidina azy ny filazantsara, iza izy, inona no nataony, ary inona no azo atao noho izany. Rehefa nanafaka ny tenany tao am-pasana i Jesosy dia niova ny zava-drehetra. Nanavao ny zava-drehetra Izy. Tao aminy no nanavotan’Andriamanitra sy nampihavanana ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany (Kolosiana 1,16- iray).
Io toe-javatra mahatalanjona io dia fintinina ao amin’ilay antsoina hoe andininy volamena ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona. Indrisy anefa fa efa fanta-daza tokoa io andininy io ka nihena ny heriny. Jereo indray anefa io andininy io. Alefaso moramora izany ary avelao hilentika ao anatin’ireo zava-misy mahagaga: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona. 3,16).
Ny filazantsara dia tsy hafatry ny loza sy ny loza. Nasehon’i Jesosy mazava tsara izany ao amin’ny andininy manaraka: “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa Izy no hamonjena izao tontolo izao.” (Jaona. 3,17).
Andriamanitra dia hamonjy izao tontolo izao fa tsy handrava. Izany no antony tokony hanehoan’ny fiainana ny fanantenana sy ny fifaliana, fa tsy ny pessimisme sy ny fialonana. Nomen’i Jesosy fahatakarana vaovao momba ny atao hoe olombelona isika. Lavitry ny orientation ny tenantsika ao anaty isika, fa afaka miaina amim-pahombiazana sy manorina eto amin'ity tontolo ity. Isaky ny manana fahafahana isika, dia tokony “hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mino.” ( Galatiana 6,10). Ny fijaliana ao Dafur, ny olan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fifandrafiana mitohy any Afovoany Atsinanana ary ny olana hafa rehetra akaiky kokoa ny tanindrazana no raharahanay. Amin’ny maha-mpino antsika dia tokony hifampitsinjo sy hanao izay azontsika atao isika mba hanampiana – fa tsy hipetraka eny an-tsisin-dalana ka himenomenona manao hoe: “Efa nilaza taminareo izahay”.